Lieferheld | Essen bestellen 6.3.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.3.1 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား စားစရာ & ေသာက္စရာ Lieferheld | Essen bestellen
Lieferheld | Essen bestellen ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အစာစားအဘယ်သို့နည်း, အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်ကတူခံစားသောအရာကို! အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများအတွက် Lieferheld.de နှင့်အမိန့်ကနေ Android အတွက် App ကိုသို့မဟုတ် tablet app ကိုမှတဆင့်အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်ရှာပါ!
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတကယ်သင်လိုချင်သောအရာခပ်သိမ်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုဖွင့်လှစ်, သင်တို့သည်စားသင့်တယ်ဘယ်အရာကိုသေချာမင့်အခါတိုင်း! သင်အကြိုက်ဆုံးပီဇာ, ဆူရှီ, သုပ်, ဘာဂါသို့မဟုတ် Poke Bowl အမိန့်နှင့်သင့်အိမ်ရှေ့တံခါးကိုထောက်ပံ့ရေးဖို့ကထထွက်သွားကြပါသည်။ ဒါဟာစူပါလွယ်ကူပါတယ်! 15000 ကျော်စားသောက်ဆိုင်နှင့် (ထိုကဲ့သို့သော KFC, ဘာဂါဘုရင် Nordsee, Vapiano ကဲ့သို့) ကျော်ကြားသောချည်နှောင်ခြင်းမှရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျ, တရုတ်အိန္ဒိယ, အီတလီ, အာရှသို့မဟုတ်ဂရိအစာစားခြင်းကိုခံစားချင်ရှိမရှိ - Lieferheld.de အပေါ်ရွေးချယ်မှုကိုသင်၌မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ရဲ့အားသာချက်များ:
✔️Reယူမှုကိုခလုတ်ကို: တစ်ခလုတ်ကို့တဦးတည်းတွန်းအားပေးနှင့်အတူအမိန့်, နောက်ဆုံးတရားရုံးနောက်တဖန်။
✔️Sichereငွေပေးချေမှု: Klarna, PayPal ကသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကနေတဆင့်အွန်လိုင်းငွေပေးပါ။
✔️Abhol function ကို: Choose ကောက်-up, စားသောက်ဆိုင်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ကသင့်အမိန့်ကောက်ရန်။
သာသနာကိုစူပါရိုးရှင်း: သင်၏လိပ်စာ Give သို့မဟုတ် app ကိုအလိုအလျှောက်သင့်တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြကုန်အံ့။ တံခါးနားမှာထိုအခါစားသောက်ဆိုင်နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအဟင်းလျာများကိုရှေးခယျြနှင့် Klarna, PayPal ကသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကနေတဆင့်အွန်လိုင်းလွယ်ကူစွာပေးဆောင်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးငွေသား။
သင့်ရဲ့အမိန့်ရောက်ရှိသည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီးစပ်စု? သင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှစားသောက်ဆိုင်မီးဖိုချောင်၏စားနပ်ရိက္ခာTracker®သူတို့နှင့်အတူမှီအောင်လိုက်လော့။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏အမိန့်၏ status ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ မှာယူမှုအတည်ပြုချက်, သင့်အစားအစာကိုသင်၏အစာအားပြောပြရန်သင့်အားလမ်းကြောင်းကိုသင်အကြောင်းကြားရန်ပြင်ဆင်သူ, နောက်ဆုံးသောခံကြောင်းအခြား: ကိုလည်းသင်သုံးမက်ဆေ့ခ်ျရ။
✔ သာ. ကောင်း၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: ပိုကောင်းတဲ့အဖွင့်အကြိမ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်, ပို့ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်နိမ့်ဆုံးအမိန့်တန်ဖိုးများကိုရယူပါ။
✔မတူကွဲပြားမှု:, အီတလီတရုတ်, ထိုင်း, သတ်သတ်လွတ်နှင့်ပိုပြီး: အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးခံစားကြည့်ပါ!
✔ဘာသာစကားများ: ဒတ်ခ်ျ, အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်နှင့်အခြားဘာသာစကားများအကြားလျင်မြန်စွာသို့ပြောင်းပါ။
✔ပို filter များ: rating အသုံးပြုပုံအကွာအဝေး, လူကြိုက်များအသစ်စားသောက်ဆိုင်များ, စျေးနှုန်းများ, ထုတ်ကုန်, ပို့ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်, အက္ခရာစဉ်နှင့်ဆီလျော်မှု။
✔တက် Pick: သင်သည်သင်၏အမိန့်ကောက်သို့မဟုတ်ပင်အပ်ရှိသည်ဖို့ပိုနှစ်သက်ချင်ရှိမရှိရွေးချယ်ပါ။
သင်က app ကိုကြိုက်နှစ်သက်? ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကိုအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ရေး! သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကိုများအတွက်အကြံပြုချက်များ, စိတ်ကူးများသို့မဟုတ်အခြားတုံ့ပြန်ချက်ရှိပါသလား? androidapp@takeaway.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကြိုက် reply မည်!
Lieferheld.de ယခု Lieferando.de ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ရရှိနိုင်ပါသည် Lieferando.de ယခုဂျာမနီရှိစားသောက်ဆိုင်၏အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့သငျသညျယခု မှစ. ဟင်းလျာများတစ်ခုပင် သာ. ကြီးမြတ်အမျိုးမျိုးကနေရှေးခယျြနိုငျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။
Lieferheld | Essen bestellen အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Lieferheld | Essen bestellen အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Lieferheld | Essen bestellen အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Lieferheld | Essen bestellen အား အခ်က္ျပပါ
cloud-droid-coorporation စတိုး21.4k
Lieferheld | Essen bestellen ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Lieferheld | Essen bestellen အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.3.1
ထုတ်လုပ်သူ Pizza Hut, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.lieferheld.de/datenschutz
လက်မှတ် SHA1: 1F:00:65:0A:6A:35:D3:F7:63:F3:93:F5:1A:B1:BB:43:A5:77:13:4C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Lieferheld GmbH
အဖွဲ့အစည်း (O): Lieferheld GmbH
Lieferheld | Essen bestellen APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ